SAFIDY HAINGANA HO AN'NY OPERA - OPERA - 2019
Velomina velabelarina: manomana Express panels amin'ny navigateur Opera
Ny famporisihana ny angon-drakitra hamonjena ny toerana amin'ny famandrihana dia fomba fanao mahazatra. Matetika amin'ny fampiasana azy ireo dia misy endrika roa ampiasaina - RAR na ZIP. Ahoana ny fomba hamoahana ity farany ity raha tsy misy ny fandaharan'asam-pampianarana manokana, no horesahantsika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Jereo koa: Rakitsary famoahana ao amin'ny format RAR an-tserasera
Sokafy ny tahiry ZIP online
Raha te hiditra amin'ny rakitra (sy ny folders) voarakitra ao amin'ny tahiry ZIP, dia afaka miditra amin'ny iray amin'ireo serivisy tranonkala. Misy vitsivitsy amin'izy ireo, saingy tsy izy rehetra ireo no azo antoka sy azo antoka fa hahomby, hany ka heverintsika roa fotsiny izy ireo, izay tena voaporofo amin'ny famahana ny olana atrehantsika ankehitriny.
Fomba 1: Unarchiver
Ity tolotra tranonkala ity dia manohana ny endrika iombonana rehetra ampiasaina amin'ny famandrihana angona. Ny antontan-tsavily izay mahaliana antsika dia tsy fiatoana, na dia zaraina ho fizarana samihafa aza. Ary noho ny minimaista, ny interface interface, ny tsirairay dia afaka mampiasa ny fitaovana an'ity tranonkala ity.
Mandehana any amin'ny sampana amin'ny aterineto Unarchiver
Tsindrio eo amin'ny rohy etsy ambony, azonao atomboka avy hatrany ny raki-peo ZIP izay tianao hasongadina. Mba hampidirana ny rakitra ao amin'ny ordinateranao, misy bokotra miavaka, ary tokony hikirakira azy io ianao. Misy koa ny fahafahana miditra ao amin'ny Google Drive sy Dropbox.
Ao amin'ny varavarankelin'ny rafitra misokatra "Explorer" Mandehana any amin'ny lahatahiry izay misy ny arsiva ZIP, mifidiana izany amin'ny alàlan'ny tsindrio ny bokotra havia (LMB) ary tsindrio "Open".
Vantany aorian'io dia halefa any amin'ny tranokalan'ny Unarchiver ilay rakitra,
Aorian'izay dia hampiseho ny ao anatiny ianao.
Raha te-haka singa iray ianao, tsindrio fotsiny amin'ny LMB izany, ary raha ilaina dia hanamafy ny fikasanao ary mametraha ny lalana hamonjena.
Tahaka izany, ny rakitra rehetra nafenina ao anaty tahirim-peo ZIP dia nakarina.
Noho izany tsotra izao, ao anatin'ny tsindry vitsivitsy monja, azonao atao ny mamafa ny ZIP-archive amin'ny fanampian'ny tolotra antserasera amin'ny aterineto ary maka ny rakitra ho solosaina ho tahirin-kevitra misaraka.
Fomba 2: Unzip Online
Mifanohitra amin'ny tolotra web teo aloha, izay manana interface Russified, ity dia amin'ny teny Anglisy. Ankoatr'izany, misy fetrany ny fampiasana azy - ny 200 kilao mahery ny tahan'ny tahiry lehibe indrindra.
Mandehana any amin'ny tolotra an-tserasera Unzip Online
Indray mandeha amin'ny tranokalan'ny tranonkala dia tsindrio ny bokotra. "Mamafa ny rakitra".
Ao amin'ny pejy manaraka "Fidio ny rakitra" for dispatching
manararaotra ny rafitra "Explorer"izay hosoka avy hatrany aorian'ny fanindriana ny bokotra mifanaraka aminy. Mandehana mankany amin'ny lahatahiry misy ny arsiva ZIP, mifidiana ary ampiasao ny bokotra "Open".
Rehefa avy nanamafy fa ny raki-daza dia nalefa tamina tranonkala, tsindrio "Mamafa ny rakitra".
Andraso mandra-pahavitan'ny famoahana,
Aorian'izany dia ahafahanao mahafantatra ny lisitry ny rakitra voarakitra ao amin'ny arisiva
ary antsoy izy ireo tsirairay avy.
Araka ny azonao jerena amin'ny sariohatra amin'ny screenshots, dia tsy vitan'ny hoe Rosianina fotsiny ny tolotra an-tserasera, fa amin'ny ankapobeny dia tsy manohana ny fiteny Rosiana, ka raha tokony ho ny Cyrillic, ny anaran'ireo rakitra dia aseho amin'ny endrika "krakozyabry".
Noho izany, efa nanambara ny fahadisoan'ny serivisy tranonkala Unzip Online isika, saingy tsy manakiana ny rehetra izy ireo. Raha tsy afa-po amin'ny fetra amin'ny habeo amin'ny rakitra maimaim-poana sy ny anarana "anarana" ianao, mba hamoahana ireo tahiry ZIP ary haka ny angona raketiny, dia tsara kokoa ny mampiasa ny Unarchiver amin'ny fomba voalohany.
Jereo koa: Rakitsary misokatra amin'ny format ZIP amin'ny ordinatera
Ao anatin'ity lahatsoratra kely ity dia nilaza taminareo ny fomba hanokafana ny tahirin-kevitry ny ZIP ao anaty aterineto. Raha fantatrao ny momba ny fitaovana omen'ny rohy etsy ambony, dia ho fantatrao fa ny rakitra amin'io karazana io dia afaka misokatra amin'ny alalan'ny fanampian'ny programa famandrihana antoko fahatelo, fa amin'ny alàlan'ny Windows OS natsangana "Explorer". Azo ampiasaina ihany koa izy io amin'ny famakiana angona.
https://termotools.com mg.termotools.com © Opera 2019